ronaldo | Ratopati
१२ वर्षपछि म्यानचेस्टरको जर्सीमा मैदान उत्रिँदै रोनाल्डो access_timeभदौ २६, २०७८
क्रिस्टियानो रोनाल्डो १२ वर्षपछि म्यानचेस्टर युनाइटेड फर्किएका छन् । र, उनले आज प्रिमियर लिगमा डेब्यु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । म्यानचेस्टरले आज न्युक्यासल युनाइटेडको सामना गर्दैछ । यो खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः ४५ मा सुरु हुनेछ । कतिपयले रोनाल्डोको डेब्यु च्याम्पिय...
मेस्सी र रोनाल्डोले अझै केही कीर्तिमान बनाउन सक्छन् access_timeभदौ १८, २०७८
मेस्सीले आफु हुर्किएको क्लब बार्सिलोना भर्खरै छाडेका छन् । ठिक, यही समय आफुलाई विश्वको स्टारका रुपमा स्थापित गर्ने म्यानचेस्टर युनाइटेडमा रोनाल्डो फर्किएका छन् । यी दुबै खेलाडी ३० वर्ष कटिसकेका छन् । मेस्सी ३४ र रोनाल्डो ३६ वर्षका भए । दुबैले आफुलाई विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीको...
रोनाल्डोको पुनरागमनपछि युनाइटेडले जित्ला प्रिमियर लिग ? access_timeभदौ १२, २०७८
रोनाल्डोको जन्म पोर्चुगलको मेडिइरा टापूस्थित साओ पेड्रो, फुन्चलमा भएको थियो । उनका बाबु थिए, हलिउड अभिनेता तथा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनका ठूलो फ्यान, त्यसैले उनले आफ्ना छोराको नाम रोनाल्डो जुराए । रोनाल्डोले एन्डोरिना नामक एम्योचर क्लबबाट आठ वर्षको उमेर...
रोनाल्डो युभेन्टसमै बस्छन् : एलिग्री access_timeभदौ ६, २०७८
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले यस सिजन क्लब नछाड्ने युभेन्टस्का प्रशिक्षकमा सीमिलियानो एलिग्रीले बताएका छन् । ३६ वर्षीय रोनाल्डोले यसै साता सामाजिक सञ्जालमा बहिर्गमनको हल्ला आफ्ना लागि अपमानजनक रहेको बताएका थिए । प्रिम्याच इन्टरभ्युमा एलिग्रीले रोनाल्डो क्लबमै रहने बताए । ‘...
मेस्सी पिएसजी गएपछि रोनाल्डोलाई धक्का ! access_timeसाउन २७, २०७८
मिडिया रिपोर्टका अनुसार पछिल्लो समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टस्मा खुसी छैनन् । युभेन्टस्मा उनको सम्झौता सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ र नयाँ सम्झौता भएको छैन । उनी अन्यत्र क्लबमा जानेबारे सोचिरहेका थिए । र, अहिलेको अवस्थामा उनको महंगो तलब व्यहोर्ने सामर्थ्य पेरिस सेन्ट जर्म...
मेसीले कोपा जितेको फोटोले तोड्यो रोनाल्डोको रेकर्ड access_timeसाउन ३, २०७८
एक साताअघि लियोनल मेसीले कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेका थिए । यी स्टारले अहिले अर्को कीर्तिमान बनाएका छन् । यसपटकको उनको कीर्तिमान फुटबल मैदानभित्रको होइन । मेसीले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टबाट कोपा अमेरिकाको उपाधिसहित फोटो पोस्ट गरेका थिए, यो फोटो इन्स्टाग्रामको ...
समर्थकले रोनाल्डोलाई कोकको बोतलले हानेपछि.... access_timeअसार १०, २०७८
पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो निकै फर्ममा देखिएका छन् । उनले जारी युरो कपका समूह चरणका तीनवटै खेलमा गोल गरे । फ्रान्स विरुद्धको खेलमा २ गोल गर्दै इरानी फुटबलर अली देईको १ सय ९ अन्तर्राष्ट्रिय गोलको कीर्तिमान बराबरी गर्न रोनाल्डो सफल भएका छन् । यस खेलमा उनले दुबै...
खेलाडीले बोतल सारेमा टिममाथि जरिवाना हुन सक्ने access_timeअसार ४, २०७८
प्रायोजकहरूले उपलब्ध गराएका पेय पदार्थका बोतल खेलाडीले वरपर सारेमा सम्बन्धित टिममाथि जरिवाना हुन सक्ने युइएफएले जनाएको छ । यसअघि सोमबार रोनाल्डोले कोकाकोलाका दुईवटा बोतल हटाउँदै मानिसहरुलाई पानी पिउन प्रेरित गरेका थिए भने पाउल पोग्वाले बियरको बोतल हटाएका थिए । ...
छोराले कोक पिउँदा हैरान हुन्थे रोनाल्डो access_timeअसार ३, २०७८
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले कोकाकोलाको बोतल हटाउँदै पानी पिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । रोनाल्डोले हंगेरीविरुद्धको खेलअघि यस्तो गरेका थिए । रोनाल्डो यस्ता सफ्ट ड्रिङ्क र जंक फुडबाट टाढै रहन चान्छन् । छोरा क्रिष्टियानो जुनियरले कोकाकोला र क्रिप्स् खाँदा पन...
एकै खेलमा रोनाल्डोका ६ रेकर्ड, अझै कति बनाउलान् ? access_timeअसार २, २०७८
हंगेरीविरुद्ध दुई गोल गर्दै क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डोले ६ वटा रेकर्ड बनाए । जो यसप्रकार छन् : १) उनी युरोकपका पाँचवटा संस्करणमा सहभागिता जनाउने पहिलो खेलाडी बने । यसअघि सन् २००४ , २००८, २०१२ र २०१६ मा पनि रोनाल्डो टिमका सदस्य थिए । २) पाँचवटै युरोकपमा गोल कीर्ति...
रोनाल्डोले पानी पिएपछि कोकाकोलाको शेयर मूल्य ४ अर्बले घट्यो access_timeअसार २, २०७८
युरो कपको प्रि म्याच कन्फ्रेन्सका दौरान हंगेरीको बुडापेस्टमा मंगलबार पोर्चुगलका कप्तान रोनाल्डोले कोकाकोलाका दुईवटा बोतल हटाएर पानी पिए । संयोग पनि कस्तो ! यस घटनापछि कोकाकोलाको शेयर मूल्य ४ अर्ब डलरले घटेको छ । युरो कपमा रोनाल्डोले सुरुवाती खेलमै घरेलु टिम हंगेरी...
रोनाल्डोलाई म्यानचेस्टर ल्याउने प्रयास नगरौं : गेरी नेभिल्ली access_timeजेठ ११, २०७८
एजेन्सी । म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व स्टार गेरी नेभिल्लीले क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डोलाई क्लबमा भित्र्याउने प्रयास नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनले तीन खेलाडीहरूको नाम लिएका छन्, जसलाई युनाइटेडले तत्कालै भित्र्याउनुपर्छ । यदि प्रिमियर लिग जित्ने हो भने युनाइटेडले ती खेलाडीलाई भित्...
के रोनाल्डो सर्वकालिन सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् ? access_timeपुस २९, २०७७
एजेन्सी । युभेन्टस्ले सास्सुओलोविरुद्ध ३–१ को जित निकालेको खेलमा गोल गरेसँगै रोनाल्डोले आफ्नो करियरको कुल गोलसंख्या ७ सय ५९ पुु¥याए । धेरै मिडियामा रोनाल्डो अब इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ताको सुचीमा संयुक्त रुपमा पहिलो स्थानमा रहेको समाचार आयो । रोन...
रोनाल्डोको मेहनत– प्रशिक्षणमा चाँडो आउँछन्, ढिला फर्कन्छन् access_timeअसोज १८, २०७७
एजेन्सी । क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो निकै मेहनती छन् । त्यसैले त ३५ वर्षको उमेरमा पनि उनी उस्तै उत्कृष्ट छन् । विगतमा सर एलेक्स फर्गुसन, कार्लो एन्सिलोट्टी, जिनेदिन जिदान लगायत प्रशिक्षकहरुले उनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेका थिए । अहिले आन्द्रे पिर्लो उनका प्रशंसक बनेका छन् ।&nb...
इन्जुरी समयमा रोनाल्डोको निर्णायक गोल access_timeकात्तिक १४, २०७६
सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले इन्जुरी समयमा निर्णायक गोल गरेपछि युभेन्ट्स इटालियन सिरि ‘ए’ फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । घरेलु मैदानमा बुधबार राति भएको खेलमा युभेन्ट्सले जेनोआलाई २–१ गोलले हरायो । खेलमा सुरुवाती अग्रता युभेन्ट्सले लिएको थ...
मेस्सी, रोनाल्डो र भानडिज्क उत्कृष्टको अन्तिम सूचीमा access_timeसाउन ३०, २०७६
एजेन्सी । युरोपियन फुटबल महासंघ (युईएफए) ले उत्कृष्ट बर्ष पुरुष खेलाडीमा अन्तिम तीन जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । गत सिजन गरेको प्रर्दशनका आधारमा युईएफएले अन्तिम तीन खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो । अन्तिम तीनमा स्पेनिस महारथि बार्सिलोनाका स्टार लियोनल मेस्सी,...